Demidov naKorolev, vatsvakurudzi veRussia Tom Rob Smith naWilliam Ryan. | Zvazvino Zvinyorwa
Zvino hongu. Zvino chando. Mhepo iri kuvhuvhuta, tembiricha yakazodonha uye mvura shoma yanaya. Hatina chando nechando, asi vachasvika uye ndinovimba vachagara gore rese. Avo vedu vari kufara vakapfeka magumbeze, vane masherefu nekofi inopisa, endererai kukumbira vamwari vechando. Zvichakadaro isu tinofambawo nekufungidzira kunzvimbo dzakanakisa kuti uzviwane. Uye hapana zvirinani kupfuura iyo Russia yechando yemhosva dzakapusa uye vaongorori anozvigadzirisa neunyanzvi uye nekufunga kukuru.
Uyezve, isu tiri pakati pezana ramakore reChimurenga cha1917. Asi nemumiriri wehungwaru Leo Demidov uye mukuru weMoscow Criminal Investigation Division, Aleksey Korolev, tiri kuenda kune imwe nguva gare gare: makore makumi matatu nemakumi mashanu.Vagadziri vayo, vanyori Tom Rob Smith naWilliam RyanVaiziva kufamba pakati pezvematongerwo enyika, mhondi dzinouraya uye kutonhora, kutonhora zvakanyanya.
1 Tom anobira smith
2.1 Aleksey Korolev
Tom anobira smith
Tom anobira smith (1979) akazvarwa uye akakurira muLondon uye ndiye mwanakomana Swedish mai nababa veChirungu. Akagamuchira BA muChirungu Literature kubva kuYunivhesiti yeCambridge. Kutenda kune Harper kudzidza akaenda kuPavia kuItari kunodzidza Creative Writing. Paakadzoka, akatanga kushanda semunyori wenyaya yeterevhizheni.
2008 yaive bhuku rake rekutanga uye Smith akaonekwa semunyori wekubudirira wegore iro. Akakunda Ian Fleming Simbi Dhagira yeYakanakisa Kufadza yakapihwa neCrime Writers 'Association. Smith yakafemerwa nehupenyu hwemhondi yekuRussia mhondi Andrei Chikatilo, iyo pakati pemakumi manomwe nemakumi mapfumbamwe yakauraya vanhu makumi mashanu nevashanu, vazhinji vacho vari vana.
Iyo yakaiswa muStalinist Russia mu 1953. Inotaura kuti sei Leo Stepanovich Demidov, gamba rehondo rinoshanda muhungwaru hweSoviet, rinofanirwa kuongorora akateedzana emhondi. Izvi zvichamuendesawo kuti abvunze nezve mamwe enhema ehuhwana hwake hwakaoma. Uye kunyangwe pakutanga achitenda bofu muhurongwa hwepamutemo hwehurongwa, paakamanikidzwa kunosora mukadzi wake nekuda kwekumukira, Demidov anoodzwa mwoyo.
Su kusagadzikanaKunyangwe paine kushongedzwa uye rakajeka sevhisi rekodhi, akabviswa pachigaro uye akadzingwa muMoscow. Akapindirwa mumasoja eguta rine maindasitiri, achasangana nenyaya yevamwe umhondi hwevana hwakavharwa nekusuwa nezviremera. Demidov achaedza kugadzirisa chakavanzika oga.
Kodzero dzekumuendesa kumafirimu dzakawanikwa ne Ridley Scott and in 2015 Mutungamiri weSweden, Daniel Espinosa akatungamira kuchinjika kwayo. Ivo nyeredzi mariri Tom Hardy naNoomi Rapace uye aive neanoshamisira sekondari saGary Oldman kana Charles Dance.
Kubva 2009. Isu tiri 1956. Demidov akadzokera kuMoscow uye anogara nemukadzi wake Raisa nevanasikana vavo vekurera Zoya naElena. Asi rake rekare uye nhaka yebasa rake rekare - seshamwari uye mhuri yeavo vaakachengeta sevashandi vehurumende - vanoramba vachimunetsa. A mutsva mutsva wemhondi ichatyisidzira kuputsa kudzikama kwakasimba. Chii chimwe, hupenyu hwemwanasikana wake Zoya huchaiswa munjodzi.
Iri izita rekupedzisira mune dzakateedzana uye rakaburitswa muna 2011, asi zviri muchirungu chete. Inototanga kare munguva ye Cold War. Raisa nevanasikana vake vaviri vanoenda kuUnited States pachirongwa chezvematongerwo enyika, asi mumwe chete njodzi isingatarisirwi kuparadza zvese zvakavakwa naLeo Demidov naRaisa.
Ryan ari Munyori weIrish anogara muLondon, kwaakashanda kwemakore akati gweta muGuta, pamusoro pekushandira pamwe nguva nenguva kweterevhizheni nefirimu.
Yaiva yake zvinyorwa zvinyorwa neiyi nhepfenyuro ichitarisa kaputeni weMoscow Criminal Investigation Division, Alexei Dimitrevich Korolev.
Muviri usina hupenyu wemukadzi wechidiki inoonekwa paatari yechechi yakatsaurwa. Mhosva iyi yakapihwa Captain Korolev, uyo anozoona kuti akabatwa mugari wemuAmerica. Iyo NKVD inosarudza kupindira uye Korolev anoteverwa pasi pekutariswa kwakanyanya. Chero kufamba kusiri iko kunogona kuperetera kutapwa kwako kuSiberia. Korolev achapinda muguva VaMuscovites kuti vataure nevatungamiriri vavo vachinzwa kumanikidzwa nevakuru vavo uye vachizvibvunza kuti ndiani wavangavimba naye.
Mushure mekutsvagisa kwako pamusoro wekutanga Korolev yakashongedzwa uye uve muenzaniso kune vese vashandi veSoviet. Asi kuita kwake kwechokwadi mune yakapfuura kesi kuchiri kufukidzwa nekuti aizove ave pamucheto pehutapwa kuSiberia. Zvino humwe husiku mumwe munhu anogogodza pasuo rake uye anotya kuti vamuziva. Pane kudaro, anoona kuti iyo Colonel Rodinov, weNKVD, inokumbira kuti utore kuferefeta iyo kuzviuraya munhu yemukadzi wechidiki, Maria Alexandrovna Lenskaia, mugari wemuenzaniso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Demidov naKorolev, vatsvakurudzi veRussia Tom Rob Smith naWilliam Ryan.
Ndanga ndiri mupdf El Niño 44 kwenguva yakareba, asi ini handina kuitora sezvisina basa. Handizive, pamwe ndakaverenga
Pindura kuna natxo
Zvakanaka. Ndinozvikurudzira kwauri.
Mabhuku matatu ekuverenga kana iwe uchinzwa kusurukirwa